Cities ku elamaDatshi ukuthanda neebhayisekile zabo. Utrecht imali eninzi ibe ibhayisekile yayo iziseko. izitrato ibhayisekile Long kunye namaziko ezinkulu yokupaka kwenza kube lula ukusebenzisa Happy apho.
Antwerp kakhulu bike sixeko friendly Belgium kaThixo, nge uqhekeko inethiwekhi yomendo okujikeleza. Neeprojekthi ezinkulu ezijoliswe ekuphuculeni kube ngakumbi, Antwerp uya kuhlala phakathi kwiindawo ibhayisekile phezulu eYurophu.
eMunich has a plan ecacileyo ukwakha indawo enkulu network ibhayisekile nokuphucula izibonelelo weebhayisekile. Eyona njongo iphambili kukufikelela 30% share ethumayo for Happy. Ukuba ufuna ukuzama phandle zokuhamba hamba Munich kwi ibhayisekile, u nga zihambe ngololiwe Berlin, Vienna, no Zurich, phakathi kwezinye izixeko.
Ingaba ukulungele siyokundwendwela ezinye oya Europe osenyongweni usebenzisa kuphela ibhayisekile yakho uloliwe? Zilungiselele ukuba adventure ebomini, yaye incwadi amatikiti etreyini yakho ekuqaleni!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-bike-friendly-cities/ - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#Bike-Friendly #Happy Bike bikefriendly europetravel train Travel
Yoga kwiimfanta Top eYurophu Ukufumana Kukhona Ngu Train